Shirkii Khaliijka oo Fashilmay isagoo aananba wali Furmin.! – Shacabka News
Shirkii Khaliijka oo Fashilmay isagoo aananba wali Furmin.!
Shirka ururka dalalka Khaliijka ee GCC oo maanta ka furmayey magaalada Kuwait ayaa la qorsheeyey inuu socdo labo maalin, balse xoogaa yar kahor ayaa la sheegay in shirka maanta lasoo afjari doono kadib markii ay kasoo qeyb geli waayeen Madax Sare ee dalalka Xulafada Sacuudiga.
Dowlada Sacuudiga ayaa shirkan usoo dirtay Wasiirkeeda Arrimaha Dibada oo aan kamid ahayn Qoyska Boqortooyada, waxaa horey loo filayey inuu yimaado Boqor Salman, Halka dalalka Baxreyn iyo Imaaraatiga ay soo direen wafuud heer hoose ah.
Dhinaca kale dowlada Imaaraatka ayaa maanta shaaca ka qaaday in UAE iyo Sacuudiga wada dhisanayaan urur iskaashi oo u gaar ah oo ka shaqeyn doona arrimaha militariga, siyaasada iyo ganacsiga, Ururkan cusub oo laga feer sameeyey kii horey u jiray ee GCC.
Author Mohamed YarePosted on 05/12/2017 05/12/2017 Categories WARARKA CALAMKA
Previous Previous post: Maxkamada Sare ee Maraykanka oo Ogolaatay dhaqan-gelinta Xayiraadii Socdaalka Muslimiinta
Next Next post: Madaxweyne Farmaajo: “Waxaa naga Go’an in aan si wada jir ah ugu shaqeyno Hawlaha aan ku Heshiinno” (SAWIRO).